एक घर: एक हेलिकोप्टर ! यो हो नि त नयाँ नेपाल !-Nagarikaawaj.com
एक घर: एक हेलिकोप्टर ! यो हो नि त नयाँ नेपाल !
अब नयाँ नेपालमा तपार्इलाई कतै जानुपर्यो भने साइकल, मोटरसाइकल, कार, बस,रिक्साजस्ता साधन वाहियात हुनेछन् । किनभने अब प्रत्येक घरमा एक- एकवटा हेलिप्याड हुनेछन् । देखाउनका लागि होइन हेलिकोप्टर राख्नका लागि र हेलिकोप्टर चढ्नका लागि ।
`एक घर: एक हेलिकोप्टर´यही मूल नीतिको वरिपरि राज्यको यातायात क्षेत्र घुम्नेछ। हेलिप्याड बनाउन आवश्यक कर्जा सहुलियत ब्याज दरमा सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। पाइलटको व्यवस्था पनि सरकार आफैंले गरिदिने छ।अहिलेका चार-पाङ्ग्रे सवारी साधनका चालकहरूलाई पाइलटको तालिम दिई उनीहरूलाई यतातिर समायोजन गरिनेछ।
इन्धनको व्यवस्था सरकारले सशुल्क गर्नेछ। घर घरमा पाइपलाइनबाट यस्तो इन्धन वितरण हुनेछ।
पाइपको भल्भ पिटिक्क खोल्नुस् पहिला हेलिकोप्टरमा तेल भर्नुस् त्यसपछि उडान भर्नुस्। इन्धन कति प्रयोग भो भनेर जान्न घरको भित्तामा एउटा मिटर टाँसिनेछ।
जस्ले जति मात्रामा प्रयोग गर्नेछ, त्यही अनुपातमा मिटर घुम्नेछ र त्यही अनुसार शुल्क निर्धारण गरिनेछ।
यातायातका भुइँफुट्टे साधनको सास्तीबाट नेपाली जनताले अब मुक्ति पाउनेछन्। यसप्रकार नेपाली यातायात क्षेत्र पाङ्ग्रे युगबाट पखेटे युगमा प्रवेश गर्नेछ। घच्याक र घुचुक, उचाल र पछार, धुवाँ र धुलो सब इतिहासका पानामा कैद हुनेछन् । र, कैद हुनेछन् तिनै पानामा बनिसकेका यी लम्बेतान सडकहरू पनि।यी सडकलाई अब संग्रहालयको रूपमा विकसित गरी पर्यटकहरू आकर्षित गरिनेछ।
तपाईं बिरामी हुनु भो ? अब आत्तिनै पर्दैन। किनभने यो नयाँ नेपाल हो । एक्काइसौं शताब्दीको नेपाल हो। केवल एक कल फोन गर्न सक्नेसम्म चाहीं हुनुपर्यो बाँकी सप्पै काम सरकारले गर्नेछ। एककल फोन सरकारलाई गर्नुस् तपाइँलाई बचाउन तपाइँको सरकार तुरुन्तै तपाइको घरमै आइपुग्छ, पूरा बन्दोबस्तीका साथ।
अब नेपालमा सोचबाटै सूर्य उदाउने छ । अर्थात् सोचबाट बत्ती बलेर झलमल्ल उज्यालो भएपछि सूर्य उदाए झैं हुनेछ। अनेक्का बाँध, जलाशय, टर्बाइन, प्रसारण लाइन सबलाई विस्थापन गरिनेछ। त्यसैले अहिले लोड शेडिङ भो भनेर नआत्तिनुस्
त्यही भएर स्वास्थ्य क्षेत्रको अबको नारा नै `तपाइको हक: घरमै चिकित्सक´ हुनेछ। यातायातको साधन खोज, अस्पताल जाउ, लाइनमा बस, नाम लेखाउ, डाक्टरलाई कुर, उस्तै परे अस्पतालमै बस, औषधी किन, फेरि फलोअपमा जाउ यी सब अबको नेपालमा हुने छैनन्। रोग पुरै निको भएपछि मात्रै डाक्टर र नर्सले तपाइँको घर छाड्नेछन्। तपाईंको गाथमा रोग टाँसिउन्जेल ती पनि तपाईंको घरमा टाँसिइरहनेछन् । नडराउनुस् तपाइले तिनलाई पाल्नुपर्दैन सरकारले नै पाल्छ।
तपाईंले खान लाउन पाउनुभएन ? फेरि एक कल फोन वा एउटा एसएमएस गर्नुस् सरकार खान लाउन पाइएन भनेर । सरकार तपाइसामु चौरासी व्यन्जन पचासी वस्त्रका साथ हाजिर हुनेछ । अहिले भोकै नाङ्गै छु भनेर चिन्ता नलिनुस् ।
घाम, हावा, पानी, फोहोरमैलाबाट विद्युत् निकाल्ने त अति सामान्य कुरा भो । जसले पनि निकाल्छ र निकालिरहेकै पनि छन् । अब हामी मान्छेको सोचबाट अर्थात् विचारबाट बिजुली निकाल्ने प्रयत्नमा छौं।यो प्रविधि अनुसार बिजुली भनेर तपाइँले सोच्ने वित्तिकै बिजुली उत्पादन हुनेछ। त्यसरी उत्पादन भएको विद्युत् अवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ। बढी भएको बिजुली हामी नजिकका छिमेकीलाई त बेच्छौं नै । निकै परका देशहरूलाई पनि स्याटेलाइट मार्फत् विक्री गर्नेछौं।
यसरी अब नेपालमा सोचबाटै सूर्य उदाउने छ । अर्थात् सोचबाट बत्ती बलेर झलमल्ल उज्यालो भएपछि सूर्य उदाए झैं हुनेछ। अनेक्का बाँध, जलाशय, टर्बाइन, प्रसारण लाइन सबलाई विस्थापन गरिनेछ। त्यसैले अहिले लोड शेडिङ भो भनेर नआत्तिनुस्।
पढिसकेपछि उपयुक्त रोजगारी दिलाउने जिम्मा पनि सरकारकै हुनेछ। त्यसैले अहिले क्षणिक रूपमा बेरोजगार छु अथवा छोराछोरीले जागिर पाएनन् भनेर चिन्ता नगर्नुस्
हालै आएको विनाशकारी भूकम्पले देशलाई तहस-नहस पारेको तथ्य सबैलाई थाहै छ। अब यस्ता नाथे भुइँचालोलाई हामी सजिलै पचाउने छौं । हरेक घरको जग जमीनको पाँच दस फीट माथिबाट हावामै बनाउन सकिने प्रविधिको बिकास गरिनेछ। मतलव अब प्रत्येक संरचनाको जग भुइँमा हुने छैन, हावामा हुनेछन् । हाम्रा घर संरचनाहरूको भुइँमा खुट्टै नभएपछि के लछारपाटो लाउन सक्छ र त्यो भुइँचालोले ? त्यसैले अब कुनै नेपालीले पनि भूकम्प पीडित हुनुपर्ने छैन।अहिले भुकम्प पीडित भइयो भनेर गुनासो नगर्नुस् ।
अबको नेपालमा छोराछोरी स्कुल पठाएर पढाउने होइन, स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सरकारले तपाईंको घरमा पठाएर छोराछोरी पढाउने व्यवस्था गर्नेछ।अहिले छोराछोरी पढाउन पाइन भनेर गनगन नगर्नुस्। कतिपय अभिभावकहरूले यो अभ्यास निकै पहिलेदेखि नै गर्दै आउनुभएको हो आफ्नो पहलमा पैसा तिरेर। तर अब जमाना बदलिइसक्यो। नेपाल नयाँ भैसक्यो ! तपाइ आफ्ना छोराछोरीलाई के बनाउन चाहानु हुन्छ ? डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, बैज्ञानिक ? त्यति मात्रै सरकारलाई भन्नुस् ।तपाइँले भने बमोजिम नहुन्जेल तपाइँका छोराछोरी सरकारको जिम्मा। सरकारकै पहलमा सरकारकै पैसामा तिनले जे पनि र जति पनि पढ्न पाउनेछन् ।
पढिसकेपछि उपयुक्त रोजगारी दिलाउने जिम्मा पनि सरकारकै हुनेछ। त्यसैले अहिले क्षणिक रूपमा बेरोजगार छु अथवा छोराछोरीले जागिर पाएनन् भनेर चिन्ता नगर्नुस् ।
किसानहरूलाई सरकारले एक-एक थान मोबाइल सेट उपलब्ध गराउनेछ, जसबाट उनीहरूले आफूलाई चाहिएको कुरा फोन मार्फत वा एसएमएस गरेर सरकारलाई जानकारी गराएको आधारमा सरकारले घर दैलोमै मल, बीउबिजन, कीटनाशक औषधि, कृषि औजार लगायत केके चाहिएको हो सम्पूर्ण कुराहरू एकैपटक हेलिकोप्टर मार्फत उपलब्ध गराउनेछ । त्यसैले अहिले फसल काट्न थन्क्याउन पाइएन भन्ने कुराको अर्थ छँदै छैन।